Data Shredder - samee xogta tirtiray unrecoverable
> Resource > Utility > wax ku ool ah jidka loo sameeyo tirtiray Data Unrecoverable
Computer ayaa kaalin aad u badan oo muhiim u ah nolosheenna maalmahan. Waxaan ka shaqeyneynaa, adeeganayay ku yaal, xidhiidhka saaxiibada u dhex, madadaalinta iyo ka badan oo ku saabsan. Kombiyuutarku wuxu og yahay iyo aad u badan oo nagu saabsan, macluumaadka aan doonayaa in aan la wadaagno iyo asturnaanta ma rabno in ay dadweynaha. Guud ahaan waxaan dooran in ay tirtirto macluumaadka inaan ka tagno, iyo faaruqiso Recycle Bin markii aynu u qayshanno gaarka ah macluumaadka, iyo waxaan qabaa inay tahay amaan.
Nasiib darro, ma ahan. Xogtaasi la tirtiro dhab ahaantii waa nooc ka mid ah xogta qarsoon marka ay timaado kombiyuutarka. Ma tirtiri kartaa wixii xog ah si buuxda u soo baxay kombiyuutarka. Disk xaq kuu sheegayaa in meel bannaan oo waa karo ka dib markii aad tirtirto wax, laakiin xogta ayaa weli ku yaalla meel. Habka wax ku ool ah si ay u sameeyaan xogta tirtiray unrecoverable waa in la doorto shredder xogta , taas oo karo masixi xogta joogta ah iyo lahagaajin. Wondershare WinSuite 2012 waa qalab sida in la iska indha tiri xogta weligiis.
La soo iibiyo Wondershare WinSuite 2012 halkan
30 Maalmood Money Back Guarantee
Ku rakib oo aan bilowno on your computer, ka dibna tag "Privacy & Security", iyo dooran "File Shredder", taas oo karo tirtiro xogta aan waxba ka tagay.
Ka dib markii ay soo galaan File Shredder ah, kaliya aad u baahan tahay in aad ku darto macluumaadka aad rabin xasaasi ah oo files, iyo fayl ku jira. Markaasuu iyagii ku soo noqday ayuu la mid click si looga hortago in lagu soo kabsaday ama la xado. Tani US buuxiyay shuruudaha ilaalinta xogta ciidan.
Tani tirtire xogta kuu ogolaanaya in aad iska indha tiri noocyada kala duwan ee files, sida waraaqaha xafiiska, sawiro, videos, PDF files, iyo in ka badan. Waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan oo diyaar u ah khubarada computer iyo bilowga ah. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay si loo xaqiijiyo waa in file aad ku dari dhab ahaantii waa mid aad rabto in aad iska indha tiri. Maxaa yeelay, mar file waxaa xoolo, ma jiraan wax qalab ah ee adduunka ku soo ceshano wax celin kara. Haddii ay jirto mid aad ku daray in si qalad ah, oo aad wax Faydi ka mid ah liiska iska indha tiri-in-ahaan ay u dooranayso iyo garaacid saar ka mid ah liiska. Markaasa lagu si aad u computer celin.
Tani waa qayb ka mid ah shaqada in Wondershare ka mid ah oo kaliya WinSuite 2012 samayn karaa. Haddii aad rabto in aad sir faylasha aad, nadiif ah cookies biraawsarkaaga, taariikhda, dhawaan URL, index files, iwm Wiper Tani xog intaas oo dhammu waxay kuu qaban karaan si aad macluumaad shakhsiyeed oo ammaan ah.
Top Talooyin ku saabsan sida loo qaab aad digsi
Maxaa la Sameeyaa Marka Windows Vista fariisiyo Up
Sida loo Edit DLL Files
Sida loo dardar Internet Explorer